HTML alergii - fuula 6
Maxxansaaf haalloota qindeessa.
Dhangeessuun barruu fakasaa ykn dhiheessa irraa argame. Yoo mallattoon saanduqa mirkaneessaFuula mataduree uumuhin goone, ykn yoo ofmaa ykn alergii tamsa'inasaphaphuu filatte, fuulli kun irra utaalame.
LibreOffice Kaasuu/LibreOffice Baafata Toleessaa Faayilii - Alergi HTML filadhu akaakuu faayilii Masaka fuula 6
Kaaya haalluu fili
Kaaya haalluu fi haalloota barruu fi duubbeef murteessa.
Galmee irraa kaaya haalluu fayyadami
Akkaataa galmee ammaa keessatti fayyade irraa haallota murteessa.
Haallota iyyaafataa fayyadami
Haalluu durtii iyya'aa saphaphuu mul'isaa fayyadami.
Kaaya haalluu maamiloo fayyadami
Wantoota dhiheessa tokko tokkoof haallota mataa kee qindeessuuf iyyama.
BanaHaalluu qaaqa, haalluu barruu dhiheessaa iddoo filachuu dandeessu.
bana Color qaaqa, haalluu geessituu dhiheessaa iddoo filachuu dandeessu.
Bana Color qaaqa, haalluu geessituu ka'aa dhiheessaa iddoo filachuu dandeessu.
banaColor qaaqa, haalluu geessituu Imalamte dhiheessaa iddoo filachuu dandeessu.
Opens the Color qaaqa, haalluu duubbee dhiheessaa iddoo filachuu dandeessu.
Title is: HTML alergii - fuula 6